Nhau - Kubudirira kwesilicon carbide makristasi uye zvishandiso
Nesilicon Carbide danda
Nesilicon Carbide Batts
Sintered nesilicon Carbide
Kubudirira kwesilicon carbide makristasi uye zvishandiso
China ndiyo inogadzira uye kuburitsa kunze kwesilicon carbide pasi rose, ine hunyanzvi hunosvika matani emamirioni 2,2, ichitsvaira zvinopfuura makumi masere muzana wepasi rose. Nekudaro, kuwedzeredza kugona kwekugona uye kuwandisa kunotungamira mukushandisa kwesimba zviri pasi pe50%. Muna 2015, iyo silicon carbide yakabuda muChina yakasvika mamirioni emamiriyoni 1.02, ine chiyero chekushandisa chinokwana 46.4% chete; mu2016, iyo goho rese raifungidzirwa kunge angangoita mamirioni e1.55, iine huwandu hwekushandisa huwandu hwe47.7%.
Sezvo China yesilicon carbide yekuendesa kunze huwandu hwakabviswa, China's silicon carbide yekuburitsa vhoriyamu yakakura nekukurumidza munguva ya2013-2014, uye yakada kudzikamiswa panguva ya2015-2016. Muna 2016, China kuti nesilicon carbide kunze kwenyika akauya 321 500 matani, kukwira 2,1% gore pagore; imomo, huwandu hwekunze hweNingxia hwakasvika matani 111,900, achiverengera 34,9% yehuwandu hwekunze uye achishanda seanokosha silicon carbide ekisipota muChina.
Sezvo zvigadzirwa zvesilicon carbide zveChina zviri zvakanyanya zvakaderera-magumo zvigadzirwa zvakagadziriswa zvine mwero zvakawedzera kukosha, avhareji yemutengo musiyano pakati pekunze nekutenga wakakura. Muna 2016, China yesilicon carbide kunze kwenyika yaive nemutengo wepakati paUSD0.9 / kg, isingasviki 1/4 yemutengo wepakati wekutenga (USD4.3 / kg).
Silicon carbide inowanzoshandiswa musimbi nesimbi, mafirakisi, zvigadzirwa, photovoltaic, zvemagetsi zvichingodaro. Mumakore achangopfuura, silicon carbide yakaverengerwa muchizvarwa chechitatu che semiconductor zvinhu senzvimbo inopisa yeR & D yepasirese uye mafomu. Muna 2015, iyo yepasi rose yesilicon carbide substrate saizi yemusika yakasvika pamamirioni eUS $ 111, uye saizi yemidziyo yesimba yesilicon carbide yakasvika pamamiriyoni emadhora eUS175; vese vari vaviri vanoona avhareji yegore yekukura mwero unopfuura makumi maviri muzana mumakore mashanu anotevera
Parizvino, China yakabudirira muR & D ye semiconductor silicon carbide, uye ikaziva kugadzirwa kwemazhinji kwe2-inch, 3-inch, 4-inch uye 6-inch silicon carbide monocrystalline substrates, silicon carbide epitaxial wafers, uye silicon carbide zvinoriumba. . Vamiriri vemabhizinesi vanosanganisira TanKeBlue Semiconductor, SICC Zvishandiso, EpiWorld International, Dongguan Tianyu Semiconductor, Global Power Technology uye Nanjing SilverMicro Electronics.
Nhasi, kuvandudzwa kwesilicon carbide makristasi uye zvishandiso zvakave zvirimo muChina mu2025, Nyowani Yemafekitori Ekuvandudza Nhungamiro, National Medium uye Yakareba-term Sayenzi neTekinoroji Yekusimudzira Chirongwa (2006-2020) uye mazhinji mamwe maindasitiri marongero. Inotungamirirwa nemitemo yakawanda inofadza uye misika iri kubuda yakadai semagetsi matsva emagetsi uye grid smart, Chinese semiconductor silicon carbide musika ichaona kukurumidza kukurumidza mune ramangwana.
Post nguva: Jan-06-2012
Adress: Hongguo Industrial Park, Huinong Dunhu, Shizuishan Guta.